I-villa yeholide 6p ezintabeni zase-Almería - I-Airbnb
I-villa yeholide 6p ezintabeni zase-Almería
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Celine
I-villa yamaholide enefenisha enhle yabantu abangu-6 enendawo yokubhukuda yangasese. I-villa itholakala esigodini esihle esibizwa ngokuthi yi-Los Higuerales e-Arboleas. Lena yimizuzu engu-10 ukusuka edolobheni eliphithizelayo lase-Albox. Leli dolobha linakho konke ukuphila kwansuku zonke, zonke izinhlobo zezitolo, izimakethe ezinkulu, ama-bar nezindawo zokudlela. Ugu lungamaminithi angaba ngu-30 uma uhamba ngemoto futhi kunemizana ethokomele (isib. I-Mojacar ne-Garrucha) namamayela amabhishi anesihlabathi.
I-villa yethu inendawo ebiyelwe ngezinyawo enendawo yokubhukuda yangasese engamamitha angu-8 x 4 enokubukeka okuhle kwezintaba. Ungaphumula kwelinye lamathala amabili, kunethala elimboziwe elibheke indawo yokubhukuda futhi ngemuva kwethala ekhishini elibheke izihlahla ze-alimondi.
I-villa yethu inakho konke ukunethezeka: ikhishi elinomshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha, ifriji nefriji, umshini wokwenza ikhofi, i-toaster, iketela, i-barbecue,... Ekamelweni lokuphumula kunendawo yokubasa umlilo futhi indlu yonke inesistimu emaphakathi yokushisisa umoya. Kusukela egumbini lokuphumula kukhona ihholo eliholela egumbini lokugezela lomndeni, amakamelo okulala kanye nekamelo lokulala elikhulu elinendlu yokugezela eneshawa.